डाक्टर सन्दुक रुइतलाई ‘जनसेवा श्री प्रथम’ ! १४ पत्रकारहरु पनि विभूषित हुने
सरकारले वरिष्ठ आँखारोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई विभूषित गर्ने भएकाे छ । यस वर्षको संविधान दिवसको अवसरमा डा. रूइतलाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम) मानपदवीद्वारा विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
देश-विदेशमा सुपरिचित डा. रूइतले हजारौं नेपालीको आँखाको ज्योति फर्काउन सफल भएकाेमा सम्मानित गर्न लागिएकाे हाे । सन् २००६ मा रोमन म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका डा. रुइत तिलगंगा आँखा अस्पतालका निर्देशक हुनुहुन्छ ।
यस वर्षको संविधान दिवसको अवसरमा सम्मानित हुनेहरुको सूचीमा १४ जना पत्रकार र दुई जना सन्चारकर्मीसमेत छन् । कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप चतुर्थबाट ८ जना पत्रकारहरु सम्मानित हुने भएका छन् । सम्मानित हुनेहरुमा डा. राजेश झा ‘अहिराज’, सागर पण्डित, राजेश कुमार अर्याल, गोविन्द प्रसाद भण्डारी, शुभशंकर कँडेल, धर्मेन्द्र कर्ण, शुभेच्छाविन्दु तुलाधर र चिरञ्जीवी मास्के छन् ।
यसैगरी सुर्खेतका सूर्यमणी गौतम, गुल्मीका मोहन बस्नेत, सुनसरीका लिलाराज खनाल, दाङका सविन प्रियासन चौधरी, बागलुङका हरिनारायण गौतम र रुकुमकी टिका विष्टलाई जनसेवा श्री पञ्चम पाएका छन् । जनसेवा श्री पञ्चम पाउनेको सूचीमा सञ्चारकर्मीद्वय तेजदत्त खकुराल (धादिङ) र कृष्णचन्द्र लामिछाने (पर्सा)को नाम पनि छ ।